नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : बाराक ओबामा यसरी रोए कार्यकर्ता माझ ! ओबामा रुँदा कार्यकर्ता को मन पनि थामिएन ! हेर्नुस् भिडियो
बाराक ओबामा यसरी रोए कार्यकर्ता माझ ! ओबामा रुँदा कार्यकर्ता को मन पनि थामिएन ! हेर्नुस् भिडियो